Suction unit for emergency care, the solution in a nutshell: Spencer JET - Emergency Live
China, June 20, 2019
By Emergency Live	 Last updated Jun 13, 2019
Chikwata chekuyamwisa chigadzirwa chekukosha kwepakutanga muhutano hwepamberi. Inogona kubvisa zvinwiwa, mvura uye kurutsa nekuipedza kubva kumurwere. Vashandi vanoishandisa zvakare kubvisa tsvina, serum kana ropa kubva mumuviri, semhepo.
The JET nyaya iyo yakasiyana-siyana yekugadzirisa zvigadzirwa, yakasikwa naSpencer, iyo inobatanidza uremu hwekusimudza nekukwirira kwakasimba nekugadzirisa uye kuwedzera kushanda.
Spencer JET ndiyo inotanga kushandiswa pasina kashoni inobatanidza canister uye ichivhara unit: kune chigadziko chinobviswa chinoderedza nhamba yezvikamu, kuvandudza simba rekutsvaira nekuderedza kuderedza mari. JET Compact ndiyo chipfupi chiduku uye chinonyanya kudarika chidimbu chokutsva pamusika. The Spencer AMBUJET, inoshandisa inyanzvi yekudzivirira, iyo inodzivirira zvose zvinoshandiswa uye inonongedzwa uye yakaongororwa kuwira kwechiitiko kune yakakwirira ye2.5m. Ndiyo sarudzo yakakodzera yeEmt nevarapi vemapurisa vanoda ruzivo rwakakonzera uye runotakura kuti vapindire mumamiriro ezvinhu akaoma.
Mutsara weSpencer AMBUJET kushambadzira mishonga ndeye 20G chirongwa chechiremba chakavimbiswa chema ambulensi, ine ruzivo rwakasimba rwekugadzirisa masvingo uye ye-auto-rechargeable system. Jet ndiyo inotanga kushandiswa kwemagetsi ekutsvaga kuwana 20G UNI EN-1789 Crash Test certificate, ichijekesa Spencer kunyatsotarisa uye tsanangudzo yepamusoro yehutengi hwechigadzirwa.
IJET mutsara inongoronga maitiro ekutsvaga akasikwa nokuda kwemaitiro akaoma zvikuru. Vachashanda mune chero mamiriro ezvinhu, nekuda kwekusimbiswa kwakaitwa neR & D yeSpencer Laboratories iyo inofungidzira kuyerwa uye kushorwa kwechikwata chekutsvaira, pasina kumbokanganwa kushandiswa kwakasiyana uye kushanda.
UNOFANIRA KUNYANYA KUSHANDISA? ZVINOFANIRA KUZIVA ZVAKAWANDA NEZVEZVO ZVENYANYA YOKUDZIDZA UNITI? CONTACT SPENCER NOMFURI YENYU!
Phone Your (kunodiwa)
Ndinoda ruzivo pamusoro
Ambulance EquipmentRescue EquipmentMilitary EquipmentHospital EquipmentGeneric information
- Poshi = shanu
Tapota ona yedu Privacy Notice pano.
Emergency Live ndiyo chete mitauro yakawanda yakatsaurirwa kune vanhu vanobatanidzwa mukurwira nekukurumidza. Sezvakadaro, iyo ndiyo midzi yakakodzera pakuenderana nekukurumidza uye mari yekambani dzebhizimisi kusvika kuhuwandu hwevashandisi vezvinangwa; somuenzaniso, makambani ose anobatanidzwa neimwe nzira mukugadzirisa nzira dzakasiyana dzekutakura. Kubva pane vanogadzira motokari kuenda kumakambani anobatanidzwa mukugadzirisa motokari idzodzo, kune chero mutengesi wezvokuchengetedza hupenyu uye zvombo zvekununura uye zvigaro.
Nzira Yomugwagwa - Boka Rinotsamwisa Rinosarudza Kusarudza Murwere Kuti Atore Kutanga
Ambulance Inoform muEurope. Kupfeka uye Kuenzanisa Muedzo neVaponesi
Iwe unogonawo kufarira Zvinyorwa kubva kumunyori
Nzira yekuwana sei Nguva yeKupindura Inokurumidza? Israeli Solution is Motorbike Ambulance
Dusseldorf Airport yakave ichivimba neRosenbauer ARFF motokari kwemakore anopfuura 40
Communications Systems for Disaster-Affected Communities: Cisco Technology Grant ...
EMS uye Kuchengetedza: Tsvaga kubuda kwemichina yeESS2019
Kutarisa Mberi Kumutambo Mukuru: INTERSCHUTZ 2020 Gore Rinoga Rakarega
TOP 5 Kuchengetedzwa Kwevanhu Nehutano Hwokukurumidzira Mikana Yebasa Munyika Yose
Mwoyo Murefu muChirangariro Chinokosha: Chirwere Chechigumbuso, Kusakwanisa Kushandira pamwe Nekutaurirana Nyaya
KUNA US ON FACEBOOK!
FAMBA KUTI ZVINHU ZVEMWE ZVINHU!
Mushandi Murefu muChirongwa Chinokosha: Criminal Gangs, ...
Hostage Crisis muPhilippines - Zvakaoma sei ...
Dai 31, 2019
Emergency Centers Handover kuSouth Africa - Chii chiri ...
Dai 27, 2019
Prev	Next 1 pamusoro 24
Foni: + 39 340 2246247
Nyora info@emergency-live.com kana enda kune fomu mail.
Nhamba yeVAT: IT02277610347
© 2019 - Emergency Live. Zvose Zvakachengetedzwa.